WhatsApp inobvumidza kugadzirisa mhando yemifananidzo yatinotumira | IPhone nhau
WhatsApp inobvumidza kugadzirisa mhando yemifananidzo yatinotumira
Ngirozi Gonzalez | 27/07/2021 12:00 | IPhone maapplication, Noticias
Iyo michina yeWhatsApp iri kuzodza kuitira inotevera inogadziridza iyo yatichaona. Muchokwadi, kune makuru nhau anotimirira nekuuya kweiyo rutsigiro rwemidzi-mizhinji kana iyo yakatogadziriswazve vhidhiyo yekufona system yakaunzwa mazuva mashoma apfuura. Asi zvakadaro, mazhinji maficha atisati taona achiri mubeta yeboka rakasarudzwa re beta testers uye nekufamba kwenguva tichavaona zviri pamutemo muapp. Rimwe remabasa aya rakapa kumeso maawa mashoma apfuura mushanduro ye beta. Ndezve iyo mukana wekugadzirisa mhando yemafaira emultimedia kana achinge atumirwa, kusiyanisa pakati pehunhu hwakanaka, otomatiki kana kuchengetedza data.
1 Inouya paWhatsApp: kugadzirisa mhando yemifananidzo yakatumirwa
2 'Zviri nani mhando' haina kunaka mhando
Inouya paWhatsApp: kugadzirisa mhando yemifananidzo yakatumirwa
Hunhu hwemifananidzo yakatumirwa neWhatsApp yagara iri musoro wevanonyanya kushandisa vashandisi vekushandisa. Kana isu tichitumira zvemultimedia zvemukati kuburikidza nekushandisa, a zvemukati compression pamwe resolution resolution nechinangwa chekudzikisa huremu hwefaira uye kudzivirira kunyanyisa kushandiswa kwedata renhamba.
Mhedzisiro, nekudaro, kugamuchirwa kwemifananidzo ine yakaderera mhando (yakatenderedza 50% yesarudzo yayo) pane iyo yekutanga. Izvi zvinoita kuti vashandisi vasarudze mamwe mapuratifomu kuti vatumire uye vagamuchire mifananidzo pahunhu hwakanyanya. Asi zvakadaro, kubvira beta yeWhatsApp sarudzo nyowani yawanikwa iyo inobvumidza kuchinjisa mhando yekurodha yemafaira emultimedia.
WhatsApp inogadzirisazve mafoni ayo evashandisi veIOS
Iyi sarudzo nyowani inobvumira mushandisi gadzirisa maficha enhau anoda kutumirwa mukutaura kwavo, vachikwanisa kusarudza pakati pesarudzo nhatu:
Zviri pachena uye zvakadomwa neWhatsApp izvo iyo yepamusoro mhando, iyo inorema kurema kwemifananidzo, iyo yakawanda data ichapedzwa uye iyo yakareba ichatora kutumira. Nekudaro, kurega mushandisi achisarudzira kufambira mberi mune pasocial network umo, kusvikira zvino, kutumira mifananidzo kwaive nenjodzi.
'Zviri nani mhando' haina kunaka mhando
Asi zvirokwazvo, izvo zvese zvinopenya haisi goridhe. Kunyangwe zvingaite senge mhando iri nani inoreva hunhu hwakanyanya kana kunyangwe hunhu padhuze nepakutanga, haina kudaro. Kutenda kune ruzivo rwakatorwa na WABetaInfo tinogona kuziva izvozvo nesarudzo 'Zvirinani mhando' iyo algorithm inoshandurwa yakasarudzwa kumanikidza mifananidzo. Iyi algorithm inobvumira chengeta 80% yepakutanga mhando maringe ne50% nhasi.
Zvakare, kana iwo mufananidzo wakakura kupfuura 2048 × 2048, WhatsApp ingango chinja saizi yayo kana yatumirwa. Zvakare, sarudzo 'Sevha data' ichatumira mifananidzo yeakaderera mhando, yakanakira avo vashandisi vasina hombe data data.
Isu tinorangarirawo izvozvo kudzvanywa kwemaalgorithms anoshandiswa muAmerica akasiyana neaya anoshandiswa mukutaura. Saka iyi sarudzo yekugadzirisa mhando yekuendesa ndeye chete yekutaura. Sarudzo iri zvishoma nezvishoma inosvika kune beta testers yekushandisa uye zvinotarisirwa kuti mumavhiki anotevera ichaonekwa nenzira yakajairika kune vanhu vazhinji.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » WhatsApp inobvumidza kugadzirisa mhando yemifananidzo yatinotumira
Ndinovimba vanoshandurawo izvo zvekukwanisa kutumira mavhidhiyo akareba-senge muteregiramu yekugovanisa mavhidhiyo muzvikamu zvinoshungurudza uye zvakare kuti nyika maminetsi 1 senge mutumwa uye kwete masekondi makumi matatu.
kuti vakaisawo states of a minute
Nyowani "Shot pa iPhone" ino neimwe nzira dzekurekodha
Iyo nyowani iPad mini ichave iine 8,3-inch skrini, isina bhatani repamba uye bezeli yakatetepa